दशैँ बिदामा घुम्न जाने होइन त? यी हुन सक्छन् गन्तव्य - परिकल्पना - PARIKALPANA
गृहपृष्ठ / जानकारी / दशैँ बिदामा घुम्न जाने होइन त? यी हुन सक्छन् गन्तव्य
by Ramji Acharya on Tuesday, October 12, 2021 in जानकारी
यस वर्ष सरदर १५ प्रतिशतभन्दा बढी वर्षाका साथ मनसुन बाहिरिएको छ । शरद ऋतुको मौसम । खुलेको आकाशका साथ महान् चाड दशैँ । मन पुलकित हुने नै भयो । सँगै लामो बिदा पनि । यस अर्थमा पनि यो घुमघामको राम्रो अवसर हो । अहिले नेपालीहरूमा घुमघामको संस्कृति विकास भइरहेको छ । अहिले आफ्नो व्यस्त दैनिकीबाट समय निकालेर घुम्ने प्रचलन बढेको छ ।
घुम्दा तनाव कम हुने, त्यस ठाउँको परम्परा–संस्कृतिका बारेमा जानकारी हुने र पुनः काममा फर्कँदा ताजापनको महसुसले स्फूर्ति बढ्ने हुन्छ । अझ पोहोरको लकडाउनले घरमै थुनिनु परेको अवस्था सम्झँदा पनि यस दशैँ घुमघामका लागि अर्को विकल्प र बहाना हो । दशैँमा टीका लगाइसकेपछि परिवार र साथीभाइ मिलेर घुम्न जाने प्रचलन बढेको छ । दशैँको अवसर पारेर ट्राभल एजेन्सीहरूले समेत विभिन्न प्याकेज ल्याउने गरेका छन् ।
माइक्रो बसमा चार सय ५० देखि पाँच सय रुपैयाँ र हवाई भाडा चार हजार पाँच सयदेखि पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँसम्ममा पोखरा पुग्न सकिन्छ । गाडीमा यात्रा गर्दा विविध दुष्यावलोकनको आनन्द लिन सकिन्छ । पोखरामा बस्न, खानका लागि सुविधा सम्पन्न होटलदेखि सामान्य लजसम्म उपलब्ध छन् । पोखरालाई तालहरूको सहर पनि भनिन्छ । फेवा ताल, रूपा ताल, बेगनास तालसँगै डेभिड फल्स, महेन्द्र गुफा छँदैछ ।
एडभेन्चर (साहसिक खेल) रूचाउनेका लागि प्याराग्लाइडिङ, बन्जी, जिपलाइन पनि छ। पोखराको कुरा गर्दा सराङकोट छुटाउन नहुने नाम हो । नयाँ गन्तव्य खोज्नेहरूका लागि पोखराको पामे र लेखनाथ पनि अहिले थपिएका नाम हुन् ।
पर्यटकीय गन्तव्यको अर्को छुटाउन नहुने नाम होे चितवन । चितवन काठमाण्डौबाट झन्डै एक सय ५५ किमि दुरीमा रहेको छ । काठमाण्डौबाट गाडी तथा हवाईजहाजमा चितवन पुग्न सकिन्छ । पर्यटक बसमा जाने हो भने सात सय र माइक्रो बसबाट जाँदा पाँच सय रुपैयाँमा पुगिन्छ चितवन। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज अन्र्तगत सौरहामा जङ्गल सफारी, थारु संस्कृति तथा कायाकिङ पनि रमाउन सकिन्छ । सौरहादेखि अघाएकाहरूका लागि मेघौली नयाँ गन्तव्य बन्न सक्छ चितवनमा ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको खप्तड झन्डै एक सय ४४ वर्ग किमिमा फैलिएको छ । हरियाली, रङ्गीबिरङ्गी फूल र प्राकृतिक सौन्र्दयको अनुपम नमुना नै मानिन्छ खप्तडलाई । हिउँदमा ढपक्कै हिउँले ढाक्ने हुँदा यो मौसम खप्तड घुम्नका लागि अनुकूल मानिन्छ। काठमाण्डौबाट धनगढीसम्म ६ सय ५० किमि बसमा यात्रा गरेर डडेल्धुरा, बझाङ हुँदै पाँच घण्टाको पैदल यात्रापछि पुगिन्छ खप्तड ।
हवाई मार्गबाट जानेका लागि पनि धनगढीसम्म जहाजमा र त्यसपछि भने गाडीबाट नै जानुपर्ने हुन्छ। समूह मिलेर गाडी रिजर्भ गरेर जाँदा बाटोमा पर्ने प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्द पनि उठाउन सकिन्छ ।
धार्मिक सँगै पर्यटनका लागि पछिल्लो समय चर्चामा रहेको गन्तव्य पनि कालीञ्चोक। केबुलकार निर्माण भएसँगै कालीञ्चोक धार्मिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित भएको छ। काठमाण्डौबाट झन्डै एक सय ३२ किमि दुरीमा रहेको चरिकोटसम्म गाडीमा गएर त्यसपछि फेरि रिजर्भ गाडीमा जानुपर्ने हुन्छ कालीञ्चोक।
मनाङ विशेषगरी पदयात्रामा रमाउनेका लागि उपयुक्त मानिन्छ । मनाङमा रहेको तिलिचो ताल निकै सुन्दर र आकर्षक मानिन्छ । प्रकृति प्रेमीका लागि यो सुअवसर हो। मनाङमा स्याउको बगैँचा, बेसी सहर र चामे घुम्नका लागि आकर्षक मानिन्छ । मनसुनका कारण पहिरो गएपछि अहिले बाटो बन्द भएका कारण ट्राभल एजेन्सीहरूले प्याकेज बनाएका छैनन् । अरू बेला ६ रात सात दिनको प्याकेजका लागि २५–३० हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ ।
बर्दिया गाडी तथा हवाई दुवै माध्यमबाट जान सकिन्छ । काठमाण्डौबाट गाडीमा झन्डै १२–१३ घण्टाको यात्रामा बर्दिया पुगिन्छ । हवाईजहाजमा जाँदा भने नेपालगञ्जसम्म गएर त्यहाँबाट गाडीमा जान सकिन्छ । बर्दियामा रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्नका लागि निकै आकर्षक ठाउँ हो । बर्दियामा बाघ, गैँडा, घडियाल गोही र डल्फिन जस्ता जीवजन्तुहरु हेर्न पाइन्छ । साथै थारु संस्कृति बर्दियाको अर्को आकर्षण हो ।
घुम्नका लागि अर्को आकर्षक गन्तव्य हो रारा। रारा जानका लागि हवाई तथा सडक दुवै माध्यम प्रयोग गर्न सकिन्छ । आफैँले गाडी रिजर्भ गरेर लिएर जाने हो भने अहिले गाडी रारा नजिकै पुग्छ। हवाई माध्यमबाट जाँदा भने नेपालगञ्ज र ताल्चा विमानस्थलसम्म अनि दुई घण्टा हिँडेर रारा पुग्न सकिन्छ ।
राराको आकर्षण भनेको रारा ताल हो। निकै मनोरम र प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिएको रारा ताल पुगेपछि थकाइ पनि मरेको झैँ हुन्छ। ट्राभल एजेन्सीहरूले ल्याएका प्याकेज अनुसार रारा जाँदा २०–३० हजार रुपैयाँ लाग्छ। आफैले समूह बनाएर जाँदा खर्च अलि कम पर्छ ।
काठमाण्डौको नजिकै घुम्न चाहनेका लागि दक्षिणकाली अर्को आकर्षक ठाउँ हुन सक्छ । काठमाण्डौबाट झन्डै २० किमिको दुरीमा रहेको दक्षिणकाली जानका लागि बस चाहिँदो मात्रामा पाइन्छ। पश्चिम तथा दक्षिणमा मकवानपुर अनि ललितपुर जिल्लासँग जोडिएको दक्षिणकालीमा आराम गर्नका लागि राम्रा र स्तरीय रिर्सोटहरू पनि छन्। दक्षिणकाली माताको मन्दिर, शेषनारायण मन्दिर, नेपालकै पहिलो जलविद्युत् आयोजना रहेको दक्षिणकाली प्राकृतिक हरियाली तथा सुन्दरताका लागि आकर्षक मानिन्छ ।
✍️ Ramji Acharya on Tuesday, October 12, 2021